China Lifting bucket mobile station စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ရှန်တီ
အုတ်မြစ်အခမဲ့ကွန်ကရစ် ba ...
အဆင်ပြေသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်တပ်ခြင်း၊ အကူးအပြောင်းမြင့်မားခြင်း၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းခွင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း။
သီအိုရီဆိုင်ရာကုန်ထုတ်စွမ်းအားm³ / h 25 40 50 75
အရောအနှော mode ကို JS500 JS750 JS1000 JS1500
မောင်းနှင်အား （kW） ၁၈.၅ 30 2X18.5 2X30
အားသွင်းနိုင်သည့်ပမာဏ （L） 500 750 1000 1500
စုစုပေါင်းအရွယ်အစား avel ကျောက်စရစ်ခဲ / ကျောက်စရစ်ခဲမီလီမီတာ） ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80 ≤60 / 80
Batching bin Volume ကိုm³ 4X4 4X4 4X4 4X4
တငျမွှောကျမော်တာပါဝါ （kW） ၅.၅ ၇.၅ ၁၈.၅ 22
အကွာအဝေးနှင့်တိုင်းတာခြင်းတိကျမှု စုစုပေါင်းကီလိုဂရမ် 1500 ± 2% 1500 ± 2% 2000 ± 2% 3000 ± 2%
ဘိလပ်မြေကီလိုဂရမ် 300 ± 1% 400 ± 1% 500 ± 1% 800 ± 1%
ရေကီလိုဂရမ် 150 ± 1% 200 ± 1% 200 ± 1% 300 ± 1%
အပိုဆောင်းကီလိုဂရမ် ၂၀ ± ၁% ၂၀ ± ၁% ၂၀ ± ၁% ၃၀ ± ၁%
အမြင့် marging ၃.၈ ၃.၈ ၄.၁ ၄.၁
စုစုပေါင်းပါဝါမီတာ 40 49 74 101
1. အဆင်ပြေသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်တပ်ခြင်း၊ အကူးအပြောင်းမြင့်မားခြင်း၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်း၊ ကျစ်လျစ်ပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ မြင့်မားသောပုံစံဒီဇိုင်း၊ 3. စစ်ဆင်ရေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်သည်။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ ၅။ လျှပ်စစ်စနစ်နှင့်ဓာတ်ငွေ့စနစ်သည်အဆင့်မြင့်ပြီးမြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ မိုဘိုင်းကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံသည်ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သွင်ပြင်လက္ခဏာများစက်ရုံသည်သုတ်ခြင်းစနစ်၊ အလေးချိန်စနစ်၊ အရောအနှောစနစ်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၊ အဆုတ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်စသည်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်း၊ အမှုန့်များ၊ အရည်ထပ်ပေါင်းများနှင့်ရေများကိုစက်ရုံမှအလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ Aggregates မ်ားကို front loader မှစုစုပေါင်းဘင်အဖြစ်သို့တင်ခဲ့သည်။ အမှုန့်ကို silo မှနေ၍ ဝက်အူပို့စက်ဖြင့်အလေးချိန်သို့ပို့သည်။ ရေနှင့်အရည်ထပ်ပေါင်းများကိုချိန်ခွင်သို့တင်ရသည်။ အလေးချိန်စနစ်အားလုံးသည် ...
အင်္ဂါရပ်များ ၁။ ဖောင်ဒေးရှင်းအခြေခံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ စက်ကိရိယာကိုလုပ်ငန်းခွင်နေရာညှိပြီးခိုင်မာစေပြီးနောက်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ အုတ်မြစ်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရုံသာမကတပ်ဆင်မှုလည်ပတ်မှုကိုလည်းတိုစေမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်၏ 2.The modular ဒီဇိုင်းကအဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစေသည်။ 3. ယေဘုယျကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံ, မြေသိမ်းပိုက်လျော့နည်း။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Mode SjHZN0 ...
သွင်ပြင်လက္ခဏာများစက်ရုံသည်သုတ်ခြင်းစနစ်၊ အလေးချိန်စနစ်၊ ပေါင်းစပ်စနစ်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်၊ အဆုတ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်စသည်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ စုစုပေါင်းသုံးလုံး၊ အမှုန်တစ်ခု၊ အရည်ထပ်တစ်ခုနှင့်ရေကိုစက်ရုံမှအလိုအလျောက်အရွယ်အစားနှင့်ရောစပ်နိုင်သည်။ Aggregates မ်ားကို front loader မှစုစုပေါင်းဘင်အဖြစ်သို့တင်ခဲ့သည်။ အမှုန့်ကို silo မှနေ၍ ဝက်အူပို့စက်ဖြင့်အလေးချိန်သို့ပို့သည်။ ရေနှင့်အရည်ထပ်ပေါင်းများကိုချိန်ခွင်သို့တင်ရသည်။ အလေးချိန်အားလုံး
ထူးခြားချက် 1. ရေသည်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ထုတ်လုပ်ရန်သင့်တော်ပြီးအထူးတည်ဆောက်ပုံသည်ရေပတ်ဝန်းကျင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ 2. Compact ဖွဲ့စည်းပုံသည်ပလက်ဖောင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ 3. ပစ္စည်းကိရိယာများသည်မြင့်မားသောလုံခြုံမှုရှိပြီးပလက်ဖောင်းဖောင်ဒေးရှင်း၏အခြေချနေထိုင်မှုနှင့်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း၏လွှမ်းမိုးမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ 4. စုပေါင်းသိုလှောင်ထားသည့်အမှိုက်များနှင့်တပ်ဆင်ထားပြီးတစ်ကြိမ်တည်းအစာကျွေးခြင်းသည်ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်မှု၏ ၅၀၀ မီတာကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
တပ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာလွှဲပြောင်းခြင်း၊ မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ မြင့်မားသောကွန်ကရစ်ရောစပ်ခြင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအစာကျွေးခြင်းနည်းပညာများကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ နံရံကပ်ဘုတ်များနှင့်ဓါးသွားသတ္တုစပ်သည်ခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည်။ 3.The စုစုပေါင်းတိုင်းတာခြင်းစနစ်က precision ပိုကောင်းအောင်အားဖြင့်စုစုပေါင်း၏တိကျမြင့်တိုင်းတာခြင်းရရှိသည် ...